आमाले विवाहको प्रस्ताव नमान्दा ६ बर्षीया छोरी अपहरण, रेष्टुरेन्टबाट उद्धार !
अपहरणमा परेका ६ वर्षीय एक नाबालिकालाई प्रहरीले दुई दिनपछि सकुशल रुपमा उद्धार गरेको छ । रुपन्देही तिलोत्तमा नगरपालिका–१२ की एक महिलाले विवाहको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको भन्दै उनकी ६ वर्षीया छोरी सावित्री थापालाई दुई दिनअघि अपहरण गरिएको थियो । अपहरणमा परेको सूचना पाएपछि प्रहरीले खोजतलासका क्रममा उनलाई बुटवल उपमहानगरपालिका–५ स्थित होटल बुटवल प्लाजा एण्ड रेष्टुरेण्टको कोठा नं १०३ बाट उद्धार गरिएको हो ।
अपहरणकारी दास विगत नौ महीनादेखि पीडितको घर नजीकै रैनी खोलामा पुल बनाउने पेटी ठेकेदारको काम गर्दै आएका थिए । सोही क्रममा अपहृत बालिकाकी आमा मञ्जु थापासँग चिनजान भएको थियो । सामान्य चिनजानकै आधारमा दासले विवाहको प्रस्ताव राख्दा महिलाले अस्वीकार गरेपछि घरमा सावित्री थापाका पति टेकबहादुर थापा नभएको मौका छोपेर उनले सोमबार साँझ करीब ८ बजेको समयमा नाबालिकालाई जबर्जस्ती अपहरण गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक भण्डारीले जानकारी दिए । पक्राउ परेका दासमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए । रासस ।
अपराध किन हुन्छ र कसरी न्युनिकरण गर्न सकिन्छ ?
अपराध हुने बित्तिकै अपराधि समातियोस भन्ने सबैको चाहना हुन्छ, जुन स्वाभाविक पनि हो तर कतिपय अवस्थामा घटनास्थल देखि अपराधी सम्म पुग्न प्रहरीलाइ निकै समय लाग्न पनि सक्छ यस्तो अबस्थामा प्रहरीलाई दबाब दिने उद्देश्यले नेपालमा बन्द हड्ताल, चक्का जाम आदि गर्ने गरिन्छ यस प्रकारको कार्यले प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न बाधा पुर्याउन सक्दछ । किनकि प्रहरीको ध्यान बन्द हड्ताल तिर केंन्द्रित हुन्छ र अपराधि सम्म पुग्न उसलाई स्वतन्त्र वातावरण नपाउन सक्छ । अपराध न्युनिकरण कुनै एक ब्याक्ती, निकाय वा संस्था को पहल मात्र पर्याप्त हुदैन । यसको लागी मुलत राज्य, राज्य मातहतका सम्बन्धित निकायहरु तथा नगरिक समाज लगायत सबै पक्षहरुको सहयोग, सद्भाब र समन्वय जरुरी हुन आउछ । अपराधको रोकथाम, नियन्त्रण र अनुसन्धान गर्ने निकाय सबल, सक्षम, ब्याबसायिक र राजनैतिक हस्तक्षेप मुक्त हुनु जरुरि हुन्छ । आम नागरिकमा पनि अपराध हामी सबैको साझा चुनौती हो र अपराधलाई यो वा त्यो बहानामा उन्मुक्ती दिन हुदैन भन्ने सोचको बिकास हुनु पर्दछ । आम नागरिकहरुकको चारित्रिक गुण, असल ब्याबहार र नैतिक शिक्षा राम्रो भएको अबस्थामा अपराध स्वत कम भएर जान्छ ।